बी–स्कूल कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड २०१९ बारे सरोकारवालाहरूका विचारहरू - १
यस्ता कार्यक्रम स्थानीय क्षेत्रमा नै हुनुपर्छ नारायण पौडेल, कार्यक्रम निर्देशक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्व विद्यालय, सुर्खेत समग्रमा कार्यक्रम राम्रो छ । यसपटक प्यानल डिस्कसन पनि राखिएको छ, जुन कार्यक्रमको एकदमै राम्रो सेसन हो । यस प्रकारको कार्यक्रम ज्ञानवर्द्धक हुनुका साथै यसले कलेजलाई प्रतिस्पर्धी बन...
निर्णायक मण्डल सदस्यको टिप्पणी : बी–स्कूल कन्क्लेभ एन्ड अवार्ड २०१९
उत्कृष्ट कलेज छनोटमा निकै नै मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ बिना राणा प्रबन्ध निर्देशक हुमशिखा कन्सल्ट्यान्सी प्रालि मेरा लागि यस प्रकारका कलेजहरूको छनोट प्रक्रियामा रहेको यो पहिलो अनुभव हो । त्यति धेरै कलेज रहेछन् र त्यसबाट उत्कृष्ट कलेज छनोट गर्न निकै नै मेहनत गर्नुपर्ने रहेछ । यति हुँदा हुँदै पनि समयमा...
बिजनेश स्कूल र बिजनेश हाउसबीच सहकार्यको खाँचो
काठमाडौं । पञ्चकन्या ग्रूपका प्रबन्ध निर्देशक प्रदीपकुमार श्रेष्ठ आफ्नो व्यवसाय र उद्योगका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति नेपालकै व्यवस्थापन कलेजहरूबाट पूर्ति हुन सक्नेमा ढुक्क देखिन्छन् । नेपाली व्यवस्थापन कलेजहरूको अध्ययन/अध्यापनमा पछिल्ला वर्षहरूमा आएको गुणस्तरीय सुधार नै हो, ती कलेजहरूप्रति श्रेष्ठको...
गानीकर्ताको हकहित संरक्षण गर्न, धितोपत्र कारोबारलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न, उद्योगधन्दाको स्वामित्वमा जनसहभागिता बढाउन, देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन, संस्थागत सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले २०५० जेठ २५ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको स्थापना भएको हो । २०४६ सालमा सम्पन्न भएको जनआन्दोलनले पुनःस्थाप...
बोर्डको स्थापना : नेपाल सरकारबाट विसं. २०५० जेठ २५ मा धितोपत्र बजारको नियमन निकायको रूपमा धितोपत्र बोर्डको स्थापना भयो । नेप्सेलाई बजार सञ्चालन अनुमति : २०५० पुस २३ मा बोर्डबाट नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से)लाई धितोपत्र बजारको सञ्चालन अनुमति दिइयो । बोलकबोलमार्फत दोस्रो बजार कारोबारको शुरुआ...
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा विसं २०७२ कात्तिकबाट अध्यक्षको पद सम्हाल्दै आएका डा. रेवतबहादुर कार्कीको कार्यकाल आगामी कात्तिकमा सकिन्छ । प्रस्तुत छ, कार्कीसँग बोर्डका पछिल्ला उपलब्धि, पूँजीबजार विस्तारका चुनौती र अबको आवश्यकता लगायत विषयमा अभियान संवाददाता ममता थापाले गरेको कुराकानी : धितोपत्र बोर्ड २७औं...
सुरवीर पौड्याल सेबोन, पूर्वअध्यक्ष (विसं.२०६५ पुस ९–विसं. २०६८ भदौ १०) धितोपत्र बोर्डका कार्यहरूमा निरन्तर विकास भइरहेको छ । मेरो कार्यकालमा सीडीएससी (सीडीएस एन्ड क्लियरिङ) स्थापना भएको हो । अहिले यसले गर्दा लगानीको क्षेत्रमा निकै सहज वातावरण बनेको छ । यो लामो समयमा कार्य तथा संस्थागत संरचनामा पनि...
नेपालको धितोपत्र बजारका गतिविधिलाई एक स्वतन्त्र विज्ञका हिसाबले हेर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ ? नेपाल धितोपत्र बजारको विकास गति राम्रो छ । आजभन्दा झन्डै १५/१६ वर्षअघि हामीले ‘ओपन आउटक्राई’ सिस्टमबाट कारोबार गरिरहेको थियौं भने अहिले अनलाइन प्रणालीमार्फत कारोबार गर्दै आएका छौं । आज ब्रोकरहरूले नेप्सेमा गएर...
समग्र नीतिगत सुधार आवश्यक काठमाडौं । चिनीमा सम्रग नीतिगत सुधार आवश्यक देखिएको छ । हालसम्म सरकारले नियमनका लागि गरेका प्रयासले सरकार, चिनी मिल, कृषक र उपभोक्ता कसैलाई पनि फाइदा नपुगेको अवस्थामा नीतिगत सुधार आवश्यक देखिएको हो । यसमा संलग्न वा सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रले तीव्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहँ...
काशीराम बजगाईं काठमाडौं । नेपालमा ५ वर्ष ८ महीनामा रू. १६ अर्बभन्दा बढीको चिनी आयात भएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आव २०७०/७१ देखि आव २०७५/७६ को फागुनसम्म नेपालमा रू. १६ अर्ब ७२ करोड ५४ लाख २९ हजार रुपैयाँको ३० करोड ६४ लाख ६३ हजार ७८१ किलो चिनी आयात भएकोे छ । यस अवधिमा ४८ लाख ५४ हजारको ७९ हज...